Kulan dhex maray Madaxda Puntland iyo Madaxweynihii hore ee Maamulkaasi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Kulan dhex maray Madaxda Puntland iyo Madaxweynihii hore ee Maamulkaasi.
Ku-simaha Madaxweynaha Puntland, C/xakiim C/llaahi Cumar “Cameey” iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda ee Puntland waxay xalay Kulan khaas ah la yeesheen Madaxweynihii hore ee Puntland, C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud “Faroole”, oo ay ka wada hadleen Xaalladda Ammaanka ee Puntland iyo Alshabaabka ku qulqulayo qeybo ka tirsan Puntland.
Shirkaasi oo ka dhacay Madaxtooyadda Garowe ayaa waxaa la isku dhaafsaday sida uu Maamulku u wajahayo Duullaanka Alshabaab iyo sidii loo adkeyn lahaa Ammaanka Guud ee Puntland.
Kulankaasi ayaa waxa uu daba socday Kulan ay Golaha Wasiiradda ee Puntland shalay yeesheen, waxayna Dowladda Federalka ku eedeeyeen inay iyada ka dambeyso Qulqulka Alshabaabka.
Wasiirka Ammaanka Puntland, Cabdi Xersi Cali “Qarjab” oo Kulankaasi kadib la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay inay Dowladda Federalka ku colaadinayso Puntland diidmadda ku aadan Nidaamka Awood-qeybsiga Beelaha ee 4.5.
“Dowladda Federalka ayaa la dhihi karaa wey ka dambeeysaa arrintaa, kadib, markii ay Puntland diideen Awood-qeybsiga 4.5 ee aan sharciga ahayn” ayuu yiri Wasiir Qarjab oo tilmaamay inay ka war hayaan inay Alshabaab ka soo gudbeen qeybo ka mid ah Koonfurta Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, Kulankii uu C/raxmaan Faroole la yeeshay Ku-simaha Madaxweynaha Puntland, C/xakiim C/llaahi Cumar “Cameey” ayaa u muuqday mid si gaar ah looga hadlay Eedeymaha loo jeediyey Dowladda Federalka, iyadoo ay Madaxda istusaaleeyeen inaan Qulqulka Alshabaab loo fasirin inay Dowladda Federalka soo abaabushay.
Alshabaabka ku sii qulqulayo Puntland oo gaaray Bandar-bayle.